Vaovao momba ny tadiny fanampiny an'ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Veloma amin'ny fifanakalozana na fivarotana ny tadiny fanampiny amin'ny Apple Watch anao
Avy amin'ny zavatra hitantsika, Apple dia amin'ny zavatra rehetra ary hatramin'ny nanjary fantatra fa ny Apple Watch miaraka amin'ny tady fingotra dia hitondra singa roa samy hafa habe izy ireo, raha raisina ho afaka manana fehin-tanana lehibe kokoa na kely ianao, maro ireo mpampiasa izay nanomboka niresaka momba ny azo atao izy ireo Malagasy izay ahafahan'izy ireo manao BandSwapper.
Natao Batemy niaraka tamin'ny BandSwapper amin'ny fahafahan'ny mpampiasa sasany mifandray amin'ny hafa mba hanakalo ireo tadiny izay tsy hampiasainy ireo ary manana fehikibo misy loko isan-karazany na koa manova ny habeny. Tsy nety ny raharaha ary dia ny an'ny Cupertino mandinika ny mety rehetra alohan'ny handefasana vokatra.
Raha ny zavatra nianarana dia toa tsy hampiditra fehy roa miasa tanteraka ao anaty boaty Apple Watch miaraka amina fehikibo i Apple. Araka ny hitanao, ny rojo vita amin'ny fingotra dia misy ampahany roa, ny iray misy farango vy izay miditra amin'ny lavaky ny faritra hafa amin'ilay tadiny izay vita amin'ny fingotra tanteraka sy miaraka amin'ireo lavaka.
Eny, ampidirin'i Apple amin'ny ampahany amin'ny tadiny ny vy vy sy ny faritra roa vita amin'ny fingotra iray, lava kokoa ny iray noho ny iray hafa. Amin'izany fomba izany, ilay olona manana tanana lehibe indrindra Ny ampahany iray amin'ny tadiny ihany no azonao esorina, ilay iray izay tsy manana farango, ary apetraka ilay faritra hafa amin'ilay tadiny lava kokoa.
Izany no antony tsy azo atao ny fifanakalozana tadim-bolo satria hijanona amin'ny famataranandro misy loko maro ianao satria fotsiny Azonao atao ny manakalo ny ampahany amin'ilay tadiny izay tsy manana ny vy vy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Veloma amin'ny fifanakalozana na fivarotana ny tadiny fanampiny amin'ny Apple Watch anao
Dinepada dia hoy izy:
ezaka be hanimba ny mpampiasa amin'ny farany ... indraindray tsy azoko
Mamaly an'i Dinepada
Norbert addams dia hoy izy:
Ahoana raha te-hametaka fehin-kibo amin'ny Sport ianao? Tsia, raha hitako amin'ny farany fa andefasako hisotro fanta izy ireo ary laniko amin'ny zavatra hafa ny vola, satria handany € 1000 amin'ny vy tiako, dia mandany izany amin'ny TagHeuer iray ihany koa aho, izay tsy azoko ihany koa ny fanangonana ary tsy ho lany andro ao anatin'ny roa taona ...
Valiny tamin'i Norbert Addams
Ny maodelin'ny elanelam-potoana vaovao an'ny MacBook 12 "dia maneho ny fiakarana an-tsehatra avy amin'ny maodely fototra
Hitanay indray ilay seranana miafina, tsy notononin'i Apple, tao amin'ny Apple Watch